Ziziphi iindlela ezisebenzayo zokuhambisa indawo yakho kwi-backlinks?
Ukuba uyazibuza ukuba isakhiwo soqhagamshelwano sisaphila okanye cha, le nqaku iya kukunika impendulo ecacileyo kulo mbuzo.
Sikwazi ukuthetha ngokuqiniseka ukuba isakhiwo sokudibanisa sinempembelelo enkulu kwizinga eliphezulu kunye negunya lesiganeko. Izixhumanisi ezingenayo zisetyenziswe ngeenjini zokukhangela ukuqinisekisa ukuba umthombo wewebhu uhambelana njani namagama angundoqo ahambelana nawo.
Enyanisweni, isakhiwo esiqhagamshelweyo esingasesikweni singabonwa nje. I-Google inenkathalo enkulu ngomgangatho wekhonkco ezingenayo kwaye ifumanisa zonke izicwangciso zokwakha izixhumanisi ze-spammy. Izixhumanisi ezingaqhelekanga azikwazi ukuba ngumsebenzi wosuku lwabaphina abaqeqeshi be-webmaster, abanomthwalo wemveli kwizityalo zomhlaba. Namhlanje, inani lezonxibelelwano zakho alikho. Emva kokuhlaziywa kweGoogle ekugqibeleni ngo-2012, bonke abangabonanga ngokulinganayo emva kwe-backlink kufuneka badedwe.
Yingakho kweli nqaku siza kuthetha kuphela ngesakhiwo soqhagamshelwano lwe-organic esiyinzuzo ngo-2017. Umxholo womgangatho uqhuba isakhiwo soqhagamshelwano lwendalo ekupheleni kweziphumo. Zonke iinzame zakho ziya kuvuzwa ngezinga eliphezulu kwiphepha lekhasi lokukhangela. Ukuba unqwenela ukufumana ukuhamba komthi wendalo rhoqo, kufuneka ukhethe iintlobo ezahlukeneyo ezizimeleyo ezahlukileyo eziphezulu.
Ukuphakamisa igunya lakho lesigunyaziso, kufuneka ukhethe izikhonkwane kwimithombo ye-PR ephakamileyo ezuzwa kakhulu yiGoogle. Njengomthetho, kubonakala kunzima ukudala iikhonkco kwimithombo enjalo yewebhu ukuba unomncinane okanye ishishini elitsha. Nangona kunjalo, kusenokwenzeka, kwaye ndiza kuthetha ukuba kutheni. Mane ulandele amaqhinga okuqhagamshelanisa ngezansi, kwaye uza kuqala ukubona ukwanda kwendlela.
Ungayifaka njani indawo yakho kwi-backlinks?
Yiba ngumsebenzisi osebenzayo kwi-Quora
I-Quora ngumthombo wewebhu wezemfundo ogqityiweyo owenzelwe ukunceda abasebenzisi ukuba basombulule imiba yabo.Ikhululekile kwaye ivulelekile kwiplati yolwazi lwabanzi ababonelela ngeenzuzo kubasebenzisi kunye nakwi-webmasters. Yonke into ofuna ukuyenza kukukhangela amagama angundoqo aphathelene niche market yakho. Ngenxa yoko, uya kufumana ikhulu lamawaka angaphenduli imibuzo. Emva koko buyela kwimibandela apho uzive uyingcali, kwaye ukuba kukho udibaniso oluthile lomnxeba kwisayithi lakho elingakunceda ukunika ulwazi oluthe xaxa ngesihloko, faka isiqhagamshelo kuso.
Yiba luncedo kwi-HARO
Umthombo othile we-PR ophezulu apho unokwakha i-backlink ye-organic and quality is HARO (ncedisa intatheli). Yona iqonga apho intatheli ehamba khona xa befuna uncedo. Bashicilela imibuzo yabo, kwaye ukuba unako ukubanika impendulo efanelekileyo neyayinceda, ufumana ithuba lokufumana i-press free. Inkqubo yokuphenya imibuzo efanelekileyo isebenza ngokufanayo kwiQuora. Kufuneka uqhube uphando ngegama lakho lokukhangela kwaye uphendule kuphela le mibuzo apho uvakalelwa khona. Ukuba intatheli ifumana umgangatho wakho wokuphendula, uya kuyipapasha kwiwebhusayithi yeendaba okanye kumagazini njengesiForbes, i-Search Engine Journal okanye i-Entrepreneur. Ngenxa yoko, uza kufumana ijusi yokuxhumela esemgangathweni kunye nokuhamba kweendlela zokujolisa. Ngokuqinisekileyo awuyi kufumana itoni yezonxibelelwano kulezi ziqonga zendaba, kodwa ngokuqinisekileyo, iya kuphucula iphrofayili yakho yekhonkco Source .